बढेको तलब अनुसार अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिको तलब कति? – Samatal Online
बढेको तलब अनुसार अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिको तलब कति?
काठमाडौं।नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै निजामति कर्मचारी तथा विशिष्ठ व्यक्तिको तलब वृद्धि भएको छ । तलब मानिसको आम दैनिकीसँग जोडिएको विषय भएकाले सबैको चासोको विषय पनि हुन्छ ।
त्यसमा पनि नेपालमा नेताहरु तथा राज्यको जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिले कति तलब लिन्छन भन्ने चासो राख्नु स्वभाविक पनि हो । ज्यालादारी गर्ने तथा विशिष्ट तहमा रहने सबैले कसको तलब कति भनेर जिज्ञाँसा राखेको हुन्छ । यसको जवाफ स्वरुप हामीले विशिष्ट व्यक्तिले सरकारबाट मासिक कति रुपैयाँ तलब बापत लिन्छन् भनेर खोजेका छौं ।
सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसद्का दुवै सभाका सदस्यम्मको तलबभत्ता १८ प्रतिशतले बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा राष्ट्रसेवक (कर्मचारी)को तलब वृद्धि गरेको थियो । कार्यालय सहायकदेखि नायव सुब्बासम्मको २० र अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो ।
त्यति बेला सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीकारीको वृद्धि गरेको थिएन । पदाधिकारीको सेवा सुविधा छुट्टै ऐनका आधारमा तोकिने भएकाले बजेट भाषणका क्रममा तलब वृद्धि नगरिएको हो । स्रोतअनुसार राष्ट्रध्यक्षको तलब मासिक २७ हजार ८१ रुपैयाँ बढेको छ । राष्ट्रपतिको तलब १ लाख ५० हजार ४ सयबाट बढेर १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ पुगेको छ ।
त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ६ हजार ३० बाट बढेर १ लाख १५ हजार १ सय १५ पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार २ सय ८० बाट बढेर ९१ हजार १ सय ९० पुगेको छ ।